Ulwahlulo lweBrain: Forebrain, Midbrain, Hindbrain
Ingqondo yinto enzima esebenza njengeziko lolawulo lomzimba. Njengengxenye yenkqubo ye- nervous central , ubuchopho buyathumela, bufumana, busebenza, kwaye buqondisa ulwazi lwenzondo. Ingqondo ikwahlula kwii-hemispheres ezisekhohlo kunye ne-right by band of fibers ebizwa ngokuba yi- corpus callosum . Kukho iintlobo ezinkulu ezintathu zeengqondo, kunye necandelo ngalinye elinemisebenzi ethile. Iinqanaba ezinkulu zeengqondo ziyi-forebrain (prosencephalon), midbrain (mesencephalon), kunye ne-hindbrain (rhombencephalon).
I-forebrain yiyona nto inkulu kakhulu isahlulo seengqondo. Iquka i- cerebrum , ebalo malunga neyesibini kwisithathu ebunini bobuchopho kwaye ihlanganisa ezinye izakhiwo zobuchopho. I-forebrain iqulethwe ngamacandelwana amabini ebizwa ngokuba yi-telencephalon kunye ne-diencephalon. Ama-nerftical optic critesal nerves afunyenwe kwi-forebrain, kunye ne -ventricle yesithathu kunye neyesithathu ye- cerebral ventricles .
Icandelo eliyinxalenye ye-telencephalon yi- cortex ye-cerebral , eyahlukana ngakumbi ibe yi-lobes ezine. Ezi zakhiwo ziquka i-lobes yangaphambili, i-lobe ye-lobes, i-lobes yecipipital, kunye ne-lobes yesikhashana. I-cortex ye-cerebral iqulethe i-buly bulges ebizwa ngokuba yi-gyri eyenza ukungena kwiingqondo. Imisebenzi ye-cortex ye-cerebral ibandakanya ulwazi lokufunda ulwazi, ukulawula imisebenzi yemoto, nokwenza imisebenzi ephakamileyo efana nokuqiqa nokuxazulula iingxaki.
I-Frontal Lobes : I-correx ye-prefrontal, indawo yangaphambili, kunye nommandla wengqondo. La ma-lobes asebenza ngokunyakaza ngokuzikhethela, ukukhumbula, ukucinga, ukwenza izigqibo, nokucwangcisa.
I-Parietal Lobes : Uxanduva lokufumana nokucwangcisa ulwazi lwenzululwazi . Ezi i-lobes nazo ziqulethe i-cortex ye-somatosensory, ebalulekileyo ekusebenziseni ukuvakalelwa kwintsimbi.
I-Occipital Lobes : Uxanduva lokufumana nokulungisa ulwazi olubonakalayo kwi-retina.
I-Lobes zesikhashana : Ikhaya lezakhiwo zelungu lezakhiwo ezibandakanya i- amygdala , kunye ne- hippocampus . Ezi zakhiwo zilungelelanisa igalelo lomsindo, kunye nokuncediswa kwimbono yokuhlola, ukubunjwa kwememori, kunye nokuveliswa kweelwimi nokuthetha.
I- diencephalon yinkalo yengqondo ehambisa ulwazi olunzulu kwaye idibanisa iinkqubo ze- endocrine kwinkqubo ye - nervous . I-diencephalon ilawula imisebenzi embalwa kuquka ukuzimela, i-endocrine kunye nemisebenzi yemoto. Kwakhona lidlala indima enkulu ekubonweni kwengqondo. Izixhobo ze-diencephalon ziquka:
I-Thalamus : Isakhiwo senkqubo yesigxina esidibanisa indawo ye-cortex ye-cerebral echaphazelekayo ekubonweni kunye nokunyakaza kunye nezinye iinxalenye zobomi kunye nomgudu womgudu . I-thalamus idlala indima ekulawuleni ubuthongo kunye nokujikeleza.
I-Hypothalamus : Izenzo njengeziko lokulawula kwimisebenzi eminingi yokuzimela, kuquka ukuphefumula, uxinzelelo lwegazi, kunye nomgaqo wokushisa komzimba. Esi sakhiwo se-endocrine senza ama-hormone asebenzayo kwi- pituitary gland ukulawula iinkqubo ze-biological eziquka ukusetyenziswa kwe-metabolism, ukukhula kunye nokuphuhliswa kwezitho zenkqubo yokuzala . Njengengxenye yesimilly system, i-hypothalamus ithonya iimpendulo ezahlukahlukeneyo zemvakalelo ngenxa yempembelelo yayo kwi-pituitary gland, i-muscle system system kunye ne-system ye-nervous system.
I-Pineal Gland : Le gland encinci ye-endocrine ivelisa i-hormone melatonin. Ukuveliswa kweMelatonin kubalulekile ekulawuleni ukulala kwamanqanaba kunye nokuchaphazela ukuphuhliswa ngokwesondo. I-pineal gland iguqula izibonakaliso zentsholongwane kwinqanaba levelwano yenkqubo ye- nervous system ibe ngama-hormone signals, ngaloo ndlela idibanisa iinkqubo ze-nervous and endocrine.
MediaForMedical / UIG / Getty Izithombe
I- midbrain yindawo yengqondo edibanisa i-forebrain kwi-hindbrain. I-midbrain kunye ne-hindbrain ndawonye babhale iqhinga leengqondo . I-brainstem idibanisa intambo yomgogodla nge- cerebrum . I-midbrain ilawula ukunyakaza kunye neenkxaso ekuqhutyweni kolwazi oluphicothiweyo nolwaziweyo. I-oculomotor ne-trochlear ne- craneal nererves zifumaneka kwi-midbrain. Ezi zinzwa zilawula uliso kunye nenkophelo yentambo. Umzila we-cerebral, umjelo odibanisa i -ventricles yesithathu neyesine ye- cerebral ventricles , uphinde ubekwe kwi-midbrain. Ezinye izixhobo ze-midbrain ziquka:
I-Tectum: Inxalenye ye- distortion ye-midbrain eyakhiwa yinqanaba eliphezulu kunye ne-colliculi engaphantsi. Ezi i-colliculi zijikeleze iibhola ezibandakanyeka kwiingcamango ezibonakalayo nezokuphicotha. I-colliculus ephezulu isebenzisa iimpawu ezibonakalayo kwaye iwadlulisela kwi- lobes occipital . I-colliculus engaphantsi yenza iimpawu zokuhlola kwaye iwadlulisela kwi-cortex yokuhlola kwi- lobe yesikhashana .
I-cerebral peduncle: Inxalenye yangaphakathi ye-midbrain equkethe imithwalo emikhulu yamaphetshana ama-nerb fiber adibanisa i-forebrain kwi-hindbrain. Izakhi ze-peduncle ye-cerebral ziquka i-tegmentum ne-crus cerebri. I-tegmentum yakha isiseko se-midbrain kwaye ibandakanya ukwakheka kwangasese kunye nenucleus ebomvu. Ukwakheka kwebala eliqhelekileyo liqoqo leentsholongwane ngaphakathi kwinkqubo yeengqondo ezithintela umonakalo kunye neempawu zombane ukuya kunye nasentolongeni yomgogodla kunye nengqondo. Zinceda ekulawuleni imisebenzi yokuzimela kunye ne- endocrine , kwakunye neengcamango ze-muscle kunye nokulala nokuvuka. I-nucleus ebomvu ubukhulu beeseli ezincedisa kumsebenzi wemoto.
I-Substantia nigra: Olu buninzi beengqondo zobuchopho kunye neeseli ezinamazinyo eziguqayo zivelisa i-neurotransmitter dopamine. I-substantia nigra inceda ukulawula ukunyakaza ngokuzithandela nokulawula imizwelo.
I-Encyclopaedia Britannica / UIG / Getty Izithombe
I-hindbrain iqulethwe yimimandla emibini ebizwa ngokuba yi-metencephalon kunye ne-myelencephalon. Iimbilini ezininzi ze- cranial zifumaneka kule ndawo yengqondo. I-trigeminal, i-abducent, i-facial, ne-vestibulocochlear neerves zifumaneka kwi-metencephalon. I-glossopharyngeal, vagus, accessory, kunye ne-hypoglossal nervo zifumaneka kwi-myelencephalon. Okwesine i -ventricle ye-cerebral nayo iyaqhubeka kule ndawo yengqondo . I-hindbrain inceda ekulawuleni imisebenzi yokuzimela, ukugcina ibhalansi kunye nokulingana, ukulungelelaniswa kwenkuthalo kunye nokuhanjiswa kolwazi olunzulu.
I-metencephalon ingummandla ophezulu we-hindbrain kwaye iqukethe iipon kunye ne-cerebellum. Iiponi ziyinxalenye yechungechunge lobuchopho , eyenziwa njengebhodi edibanisa i-cerebrum kunye ne-medulla oblongata kunye ne-cerebellum. Iiponi zinceda ekulawuleni imisebenzi yokuzimela, kunye neendawo zokulala nokuvusa.
I- cerebellum idlulisela ulwazi phakathi kwemisipha kunye neendawo ze-cortex ye-cerebral ezibandakanyeka ekulawuleni imoto. Le ncedisi yezinto ezihamba ngayo i-hindbrain incedo ekuhambeni kakuhle ukulungelelanisa, ukulungelelanisa kunye nokulungiswa kwemali, kunye neetoni zamathambo.
I-myelencephalon yindawo engezantsi ye-hindbrain ephantsi kwe-metencephalon kunye nangaphezulu kwentambo yomthambo. Iqukethe i- medulla oblongata . Isakhiwo sobuchopho sidlulisela iimpawu zeemoto kunye neengqondo phakathi komgca womgogodla kunye neengqondo eziphezulu. Kwakhona kuncedisa ekulawuleni imisebenzi yokuzimela njengokuphefumula, intliziyo yesantya , kunye nezenzo zokuzibandakanya kuquka ukugwinya nokunyelisa.
Iimvo Ezihlanu kunye nendlela abaSebenzayo ngayo
Ukuguqulelwa: Ukwenza iProteyin Synthesis inokwenzeka
4 Amanyathelo okuqhuba iCardia
Gyri kunye neSulci yeBrain
Umsebenzi weBasal Ganglia
Kutheni Abantu Bathunga? Konke Okufuneka Ukwazi
I-Parietal Lobes yeBrain
I-Ventricular System yeBrain
10 Isandi Siyayithanda Ininzi
Cingulate Gyrus kunye neLimbic System
Yintoni iFlection Fraction?
I-9-Hole Recordings Recordings kwi-PGA Tour
I-Fast Fast Bowlers KwiCricket yovavanyo
Funda isiFrentshi for Free: Resources Best
Indlela yokusebenzisa iilwimi eziqhelekileyo ezingenasesikweni
Inkcazo yeNtloko yeMahla
Indlela yokudibanisa iLwimi elithi "Dire" ngesiTaliyane
IMithetho yeeJumpi ezinde zeOlimpiki
Indlela yokuhlamba, i-Wax kunye neNgcaciso yakho yeCorvette
Iimemorabilia ezimnyama: Ukuqokelela iiJookie Jars
Iingcebiso ezi-7 zokwenza indlu encinci
Ndicinga ukuba ndibe neGrey GRE Score. Ngoku kuthweni?
Inetyala njani i-Agamemnon?
Kutheni i-Tuskegee neGuatemala Izifundo zeSyphilis ziNyango yoLuntu
Imbali yeKleenex Tissue
Ukumisa iindaba zeentlanzi
Ukuchonga okulula kunye nokuguga kwe-American Ginseng
Imizekelo ye-Eulogy kunye nencazelo
IiNdawo ezili-20 ezikhulu kunazo zonke zaseMelika ezisekelwe kuluntu
I-Notorious BIG Biography
Gag Grouper zokuChobisa
Iicolisi zaseClastic International Picker Trucks
Izibambiso zesiTenzi zesiTaliyane: I-Ricevere
Uvavanyo loLwazi lokuFunda nokuBhala?
Iimfazwe zokuQala zokuQala kunye neSibini